Nezvedu - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Nezve & Olink Technology Co, Ltd.
Kubvira muna 2001, Olink yave kuda mukugadzira tsika waya harnesses, waya magungano, USB wire, motokari makaseti connectors, zvigadziko, chitete uye zviteshi. Zvichakadaro, isu zvakare tinopa OEM, ODM sevhisi mune zvigadzirwa dhizaini / APQP nhanho kune vatengi zvinodiwa.
Yedu-mumba kufora kunosanganisira kuumba uye tooling, waya uye waya extrusion, chinongedzo uye socket gungano, chaiyo simbi yekutsika, waya sunga uye tambo gungano. Isu tinopa izere huwandu hwemotokari chinongedzo uye socket yemarudzi ese akanakisa kutengesa mota.
Zvigadzirwa zveOlink zvinoshandiswa zvakanyanya mumagetsi emagetsi michina senge chengetedzo system, AV system, Multimedia system nezvimwe, pamwe nemotokari dzemagetsi, UTVs, matraki epasi, zvigadzirwa zvemishonga, zvemitambo, kasino michina, ATM, midziyo yemumba, mutengi zvemagetsi uye mwenje we LED. Zvishandiso zvakashandiswa ndeROSH / Reach / CA65 inoenderana uye ine UL / CUL, VDE, CCC tendero. Auto waya netambo zvinoenderana neSAE / JASO / DIN zviyero. Tichawana yazvino IATF16949 muna Chivabvu 2018.
We kunze kwenyika kuEurope, Mid-kumabvazuva, America, Australia uye Japan musika. Vatengi vedu vanozivikanwa vanosanganisira 3M, Yamaha, Honeywell, Valeo, VDO uye Visteon.
Fekitori yedu inowana muHuizhou City, Guangdong Province, kweawa imwe chete uchienda kuSenzhen. Iine 17,000 mativi emamirimita emusangano nzvimbo, isu tine vangangoita mazana manomwe evamwe.
Mhanya ne ERP uye CRM system, Isu tinogara tichitevedzera hunhu hwe KUVIMBIKA WAKADZIDZISANA, Gadzira ZVAKAWANDA ZVINOKOSHA KWEMUTengi UYE KUKURA NOMUTENGI
Isu takazvipira kuve wepasi rese anokwanisa ODM mutengesi wewaya tambo uye tambo yegungano, apfuura chikwangwani cheIATF 16949: 2016 mhando sisitimu uye ISO14001: 2015 yezvakatipoteredza system, pamwe ne ISO13485 medical system chitupa.
Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neRoHS, REACH uye isiri-phthalate yekudzivirira nharaunda, zvese mbishi zvinhu zviri UL zvinogamuchirwa.
QC / technical Tsigiro
Vashandi vedu vebazi rekugadzira vane makore anopfuura mashanu ruzivo mukugadzirwa kwetambo dzakabatana. QC ine huwandu hwevashandi gumi nevasere. Mushure mekusarudzika kwakasimba, waya inosunga kuongorora ine makore anopfuura masere echiitiko. Dhipatimendi redu reinjiniya rakawana zvitupa zvakawanda zvehunyanzvi uye makore gumi neshanu ruzivo rwekutsvagisa nekusimudzira zvigadzirwa zvematare.
Isu tinopa 7 * 24H sevhisi yekupa yedu mutengi chitaurwa mukati mezuva rimwe, kupa masampuli mukati memazuva matatu, odha inogona kununurwa mukati memazuva manomwe munguva pfupi, yedu yekugadzira yezuva nezuva kugona kunogona kusvika mazana mashanu emazana
Zvigadzirwa zvedu zvinonakidzwa nemusika muUnited States, Europe, Australia, Canada, uye Aisa.
Tiri nemwoyo wose kugamuchira kushanya kwako, Huizhou Olink Technology Co., Ltd. uchava shamwari yako yakavimbika!